Izinyathelo Ezi-7 Zokumaketha Ngedijithali iNirvana | Martech Zone
Izinyathelo ezi-7 zokumaketha kwedijithali iNirvana
Njengoba sisebenzisa amasu edijithali namakhasimende ethu, ngesaba ukuthi asibonisi futhi sichaze lelo qhinga ngendlela ebesingaba ngayo. Ngithokozela kakhulu iSmart Insights ngokuhlanganisa ndawonye lokhu kubuka konke kwecebo lokumaketha ledijithali eliphelele, neliphumelelayo nezinyathelo okufanele uzenze ukuzisebenzisa. Ngifuna ukusebenza namakhasimende ethu ukubonisa kangcono le ndlela futhi sisebenzise amamethrikhi ethu empumelelo.
I-infographic entsha ye-Smart Insight ichaza izinyathelo ongazithatha ukwenza ngcono ukusebenzisa kwakho ukumaketha kwedijithali. Ukukusiza uqhathanise intuthuko yakho namanye amabhizinisi afake imiphumela evela ocwaningweni lwabo lwakamuva olubukeza ukuthi ibhizinisi linjani ukuphatha ukumaketha kwedijithali, umbiko wamahhala.
Tags: isu lokumaketha ye-digitalukuqonda okuhlakaniphile